प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको साधारण सभा आज, यी हुन् पारित हुने एजेण्डा - Arthasansar
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको साधारण सभा आज, यी हुन् पारित हुने एजेण्डा
विहीबार, २९ असोज २०७७, ०६ : ४६ मा प्रकाशित
अर्थ संसार, काठमाडौं - प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको वार्षिक साधारण सभा आज (असोज २९ गते बिहिबार) हुने भएको छ । इन्स्योरेन्सको असोज ४ गते आइतबार बसेको संचालक समितिको बैठकको निर्णयानुसार कम्पनीको तेस्रो वार्षिक सभा आज म्यारियट होटल, नक्साल, काठमाडौंमा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ ।
एनएलजी इन्स्योरेन्सले बोलायो एजिएम, के-के छन् एजेण्डा ?
नेप्सेले गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्ससँग ३ दिने स्पष्टिकरण माग्यो !
एनएलजी इन्स्योरेन्सले डाक्यो एजिएम, के-के छन् मुख्य एजेण्डा ?
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सले बोलायो वार्षिक सभा, के-के छन् मुख्य एजेण्डा ?
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले डाक्यो साधारण सभा, कहाँ र कहिले ?